Google Ads 2.7.247499852 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.7.247499852 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
Application မ်ား စီးပြားေရး Google Ads
Google Ads ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အဆိုပါ Google ကကြော်ငြာ app ကိုသင့်ရဲ့ Android စမတ်ဖုန်းကို အသုံးပြု. , သင်ဘယ်နေရာကနေမဆိုသင့်ရဲ့ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူချိတ်ဆက်နေဖို့ကူညီပေးသည်။ သင်အလွယ်တကူသင်၏ desktop အကောင့်ဤရိုးရှင်းသောအဖော်နှင့်အတူသွားလာရင်းပေါ်တွင်သင်၏ကြော်ငြာတွေ '' စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကချောချောမွေ့မွေ့မသင့်လုပ်ငန်းကိုသင်ကြာဘယ်မှာကိစ္စ running သင့်ရဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်။
● Update ကိုလေလံနဲ့ဘတ်ဂျက်
● Get Real-time သတိပေးချက်များနှင့်ဆိုင်ရာအသိပေးချက်များ
● Call ကို Google ကျွမ်းကျင်သူ
●, Add တည်းဖြတ်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်သော့ချက်စာလုံးများ
ဒီ app ကိုသာ Google မှကြော်ငြာဖောက်သည်တည်ဆဲအဘို့ဖြစ်၏။
http://goo.gl/tNs1Wi: AdWords အအသုံးပြုသူများအမှာ Store မှာ Play ဂူဂဲလ်အတွက်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် app ကို download လုပျနိုငျပွောပွပါ။ Google နဲ့ကြော်ငြာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, google.com/ads သွားရောက်ကြည့်ရှု။
Google Ads အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Google Ads အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Google Ads အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Google Ads အား အခ်က္ျပပါ
6sto စတိုး 3.3k 436.72k
Google Ads ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Google Ads အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.7.247499852
App Name: Google Ads
Release date: 2019-05-21 07:02:21
လက်မှတ် SHA1: 24:BB:24:C0:5E:47:E0:AE:FA:68:A5:8A:76:61:79:D9:B6:13:A6:00
အဖွဲ့အစည်း (O): "Google
Google Ads APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ